Global Voices teny Malagasy » Efraín Ríos Montt Voaheloka Ho Namono Olona Sy Nanao Heloka Bevava Tamin’ny Olombelona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Mey 2013 11:33 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Nancy
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Tantara, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Voaheloka ho namono olona sy nanao heloka bevava tamin'ny olombelona i Efraín Ríos Montt  ilay mpanao didy jadona taloha tany Goatemalà. Nahazo ny rariny ihany ny teratany  Ixil Maya any Goatemalà rehefa niady teny amin'ny fitsarana nandritra ny taona maro. 
Nobitsihina mivantana sy naparitaka malaky ny didim-pitsaràna[es] .
Nifehy an'i Goatemalà ny Martsa 1982 ka hatramin'ny Aogositra 1983 nandritra ny ady an-trano naharitra 36 taona i Rios Montt. Toy izao ny fanazavan'i Xeni Jardin ao amin'ny BoingBoing : ” Voaheloka ho namono olona nandritra ny fanentanana momba ny fanoherana ny fitroaram-bahoaka tamin'ny 1982-1983 izay nahafatesana Maya Ixil 1.771 ilay Jeneraly taloha sady Filoham-pirenena 86 taona.”
Amin'izao fotoana izao, isan'ireo vondrom-piaraha-monina mahantra indrindra ny Ixil, mahatratra 77% eo ho eo no miaina anatin'ny fahantrana [es].  Vazimba teratany ny 40%-n'ny mponina any Goatemalà, ary mahantra ny valo amin'ny folo amin'ireo mponina ireo. Ambonin'izay, misy fiantraikany amin'ny fampianarana sy ny asa  ho azy ireo ny fanavakavaham-bolon-koditra.
Na dia eo aza ny fahantran'izy ireo, tsy mitaky onitra ireo sisa velona fa mitaky ny rariny, araka ny fanazavana nentin'Atoa Benjamín Jerónimo, iray amin'ireo mpitory ny vonoan'olona, tao amin'ny tribonaly tamin'ny fehinteniny tamin’ ilay fitsaràna sarotra izay fintinin'ny Amnesty International amin'ny teboka folo : 
Làlana adin'ny folo mahery no manelanelana an'i Goatemalà City, toerana anaovana ny fitsaràna, sy Ixil raha mandeha fiara fitateram-bahoaka. Na dia eo aza ny karama kely sy ny halavirana, dia tonga tao amin'ny fitsaràna isan'andro ireo olona ao amin'ny vondrom-piaraha-monina Ixil, araka ny sary asehon'i James Rodriguez ao amin'ny MiMundo.org sy ny tatitra ataon'i Xeni Jardin  ao amin'ny Boing Boing . Nobitsihan ‘i Xeni mivantana avy ao amin'ny fitsaràna ny didim-pitsaràna farany.
Nisy lahatsary  nanazava ny porofo rehetra mikasika ilay fitoriana nalefan'ny PBS tany Etazonia tamin'ity herinandro ity, izay niteraka adihevitra momba ny fandraisan'anjaran'ny Filoha Reagan. Nampian'ny  lahatsoratry ny Firaketana ny Fiarovam-pirenena ” Ny ady farany : Fanentanan'i Rios Montt nanoherana ny fitroaram-bahoaka : antontan-taratasy Amerikana sy Goatemalteka mitantara ny Paikadin'ny Fandoroana Tanàna” :
Nampiasain'ny mpiserasera tamin'ny aterineto ny tenifototra hoe : #riosmontt , #genocidegt  ary #sihubogenocidio  (“eny, nisy famonoan'olona”), ary nisy fanaparitahana mivantana eto  (feo), eto  (feo) ary eto .
Nisy ihany koa ireo mpiserasera amin'ny aterineto izay nandà fa tsy nisy famonoan'olona, nampiasa ny tenifototra #nohubogenocidio  (tsy nisy famonoan'olona) izy ireo hizaràny ny fomba fijeriny.
Nandray andraikitra sy nizara ny sary  naneho ny fanohanany ny rariny ny mponina eto amin'izao tontolo izao nandritra ny fitsaràna.
Nisy ireo mpilatska an-tsitrapo avy amin'ny NISGUA , Peace Brigades International , Collectif Guatemala ary ireo ONG hafa nanampy sy nanohana ny fianakavian'ireo sisa velona nandritra ny fitsaràna. Nadikan'izy ireo ho amin'ny fiteny Anglisy sy Frantsay ny votoatiny mba haparitaka amin'izao tontolo izao.
Telopolo taona aty aoriana, io didim-pitsaràna manan-tantara nampivoitra ny Fifanarahana mahakasika ny famonoan'olona  sy ny fampiharana ny heloka atao amin'ny olona io dia antoka ho an'ny olona tsirairay, satria io no mpisava làlana ho an'ireo fifandirana mbola misy amin'izao fotoana manerana ny tany. Tsirim-panantenana ho an'ireo tanàna rehetra izay voamarika ho ‘fahavalo’ any Syria , ho an'ny fahorian'ny Rohingya  any Myanmar, ary ho an'ireo ady mbola ho avy izany.
Ankoatra izay, manamarika ny fanombohana vaovao ho an'ny Goatemalà iray miara-mirona io, ny fandraisana an-tànana sy fianarana avy amin'ny fototra maha izy azy sy ny fahasamihafan'ny foko 24 izany, izay manomboka amin'ny fahavononana, faharetana ary ady tsy misy herisetra ho an'ny rariny nampianarin'i Ixil. Efa nahazo fandresena sahady [es]  ny vahoakan'i Ixil araka ny filazan'ny El Faro, gazety Salvadoriana iray amin'ny aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/19/48455/
 taona maro. : http://www.riosmontt-trial.org/trial-background/timeline-of-events/
 naparitaka malaky : http://tv-online.in/guatevision-live
 mahatratra 77% eo ho eo no miaina anatin'ny fahantrana [es].: http://www.s21.com.gt/pulso/2012/11/23/ine-cinco-departamentos-reflejan-mas-pobreza
 valo amin'ny folo : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20207581~menuPK:443285~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html
 fehinteniny tamin’: http://nisgua.blogspot.com/2013/05/genocide-on-trial-day-26-benjamin.html
 teboka folo :: https://www.amnesty.org/en/news/guatemala-s-trial-decade-ten-facts-2013-05-08
 fandraisan'anjaran'ny Filoha Reagan. Nampian'ny: http://www.globalresearch.ca/us-sponsored-dictators-tales-of-reagans-guatemala-genocide/5331929
 eto : http://paraqueseconozca.blogspot.com/
 andraikitra sy nizara ny sary: https://www.causes.com/actions/1740392-support-justice-for-genocide-in-guatemala
 Fifanarahana mahakasika ny famonoan'olona : https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
 heloka atao amin'ny olona : https://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity
 Efa nahazo fandresena sahady [es]: http://www.elfaro.net/es/201304/opinion/11787/